Accueil > Gazetin'ny nosy > Olan’ny “gare routière” Andohatapenaka: Taratra ny tsy fahazai-mitantan’ireo mpitondra HVM
Olan’ny “gare routière” Andohatapenaka: Taratra ny tsy fahazai-mitantan’ireo mpitondra HVM
Raha ny sehatry ny fitaterana no resahina dia vaovao anisan’ny nisongadina, nanomboka tany amin’ny tapatapaka ny volana febroary lasa teo, ny famindrana ireo taxi-brousse eny amin’ny fasan’ny karana ho etsy amin’ny “gare routière” vaovao eny Andohatapenaka. Tamin’ izany fotoana izany dia ireo kaoperativa mpitatitra miasa amin’iny lalam-pirenena voalohany iny no nafindra teny Andohatapenaka. Omaly kosa dia ireo kaoperativa sasantsasany eny Ambodivona, izay miasa amin’iny lalam-pirenena faha 4 sy faha 6 iny no nafindra teny amin’ity toby fiantsonana vaovao ity. Tahaka ny zava-niseho tapa-bolana lasa izay, saika tsy misy mankasitraka ary velon-taraina daholo ireo kaoperativa niasa teny Ambodivona ka nafindra omaly teny Andohatapenaka. Ny antony, mahatsiaro tena ho matiantoka ireo mpitatitra noho ny fandaminana napetraka ny tompon’andraikitra eo anivon’io toby fiantsonana vaovao io. “Ny zava-misy amin’izao fahatongavanay ety amin’ny gare routière Andohatapenaka izao dia fiara 2 isaka ny kaoperativa ihany no mahazo mameno olona ary rehefa feno ny fiara iray vao afaka miditra ny fiara hafa noho ny fahateren’ny toerana. Miteraka fatiantoka ho anay mpitatitra anefa izany satria raha manodidina ny 10 eo isan’andro ny isan’ny fiara ato amin’ny kaoperativa misy anay no mandeha midina any amin’ny faritany, dia lasa fiara 2 na 3 eo sisa. Mazava ho azy fa matiantoka izahay mpitatitra manoloana izay fandaminana vaovao izay ka tsy ankasitrahanay izany”, hoy ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny KOFIMAD, iray amin’ireo kaoperativa nafindra eny Andohatapenaka, omaly. Raha ny filazan’ireo mpitatitra ihany dia misy ny lamina napetraka isaka ny kaoperativa ho fitsinjovana ny tompona fiara rehetra, kanefa raha izao lamina vaovao napetraka eny Andohatapenaka izao dia ho matiantoka ireo tompona fiara. Marihana fa tao anatin’ny andro vitsy izay dia mitokona tsy mety miasa ihany koa ny ankamaroan’ireo kaoperativa mampitohy an’Arivonimamo sy ny Antananarivo, tao aorian’ny namindrana azy ireo teny Andohatapenaka. Ny azo andikana izao olana na disadisa misy eny amin’ny “gare routière” Andohatapenaka izao dia tsy mahay mijery lavitra rehefa manao zavatra ny fitondrana HVM. Nahoana no tsy fantatr’ireo tompon’andraikitra amin’ny resaka fitaterana sy ny minisitera voakasika amin’izany ny olana mety hitranga amin’ireo kaoperativa rehefa tonga ny fotoana hamindrana azy ireo eny amin’io toby fiantsonana vaovao eny Andohatapenaka io? Tsy nisy ve fifampiresahana tany amboalohany ka aty aoriana vao taitra daholo ireo kaoperativa mpitatitra rehefa mahita ny lamina napetraka? Raha hiverenana kely ny zava-niseho omaly teny Andohatapenaka, voatery nasiana mpitandro filaminana maro teny an-teorana vao maraina, sao sanatria nisy ny fihetsiketsehana ataon’ireo mpitatitra izay tsy mankasitraka izao famindrana toerana azy ireo izao. Izany rehetra izany no mbola manaporofo hatrany ny tsy fahaiza-mitantan’ny mpitondra ankehitriny.
Tetik’asa ZIA ao Ibity: Hahazo tombony ny mponina sy ny kaominina
Ny maraina ny talata 28 febroary ny fotoana niarahan’ireo mpandraharaha miisa dimy misehatra ao anatin’ny tetikasa ZIA (Zone d’investissement agricole) ao amin’ny kaominina ambanivohitr’Ibity sy ireo vahoaka mikatsaka tombontsoa amin’ny fanajarina ny tany. Nidina ifotony ny tao amin’ny Faritra Vakinankaratra tarihin’ny talen’ny fampandrosoana ny Faritra Andriamatoa Rakotoarivelo Rivo Herindray sy ny tale miadidy ny lafintany Ramatoa Ramahandriarivo Fanja nanotrona azy ireo no sady mpiahy rahateo ity tetikasa ity. Nisy ny fitsidihana ny tany nohajariana niarahana tamin’ireo mpiara-miombon’antoka sy ny avy ao amin’ny faritra Vakinankaratra ary nisy ihany koa ny fiaraha-misalahy tamin’ny fanaovana lalana miazo ny toerana misy ny tetikasa. Nampahafantarana ny fisian’ny tetik’asa ZIA sy ny hoentin’izany eo amin ny fampandrosoana ary ny fametrahana amin’ny fomba ofisialy ny asa ho tanterahany mifanaraka amin’ny bokin’andraikitra. Afa-po ireo mpandraharaha miisa 05 eny an-toerana. Nisolo tena azy ireo Andriamatoa Ranaivoson Briton Tanjona ary naniry ny hisian’ny fiaraha-monina mirindra eo amin’ny mpandraharaha sy ireo mponina eny an-toerana. Mety haharitra manodidina ny 25 taona mantsy ny asa atao eny an-toerana. Ho fanamafisana izay fiaraha-monina izay sy hisian’ny fiaraha-monina tsy misy rahoraho dia nisy ny famonoana omby roa ho fifampizarana ny nofon-kena mitam-pihavanana. Mahazo tombony betsaka ny mponina amin’ny fisian’ny tetikasa izay manome asa ho azy ireo satria ny mponina ao ihany no misitraka izany indrindra fa ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra no tanjona hapetraka ny tetik’asa ZIA. Mijanona ho fananan’ny kaominina izay miara-miasa amin’ny Faritra, ny Prefektiora ka hatrany amin’ny Fokontany ny zava-bita amin’izany. Nasiana asa mitsangana niarahan’ny vahoaka sy ny mpandraharaha ka notanterahina tamin’ny alalan’ny asa tana-maro. Ankoatra ny kaominina Ibity dia maro ihany koa ireo tanim-panjakana hitarihana ny fanajariana toy ny kaominina Vasiana, Andranofito sy ny maro hafa. Ohatra azo alain-tahaka izao natao tao Ibity izao, ho an’ireo mpandraharaha hafa any amin’ny toerana misy ZIA. Nofaranana tamin’ ny nofon-kena mitam-pihavanana ny lanonana mba ho marika ny fanamafisam-pihavanana sy ny fametrahana fitokisana amin’ny vahoaka satria izy ireo no vato fehizoro antoka ny fampandrosoana.